Ukulandela ukumiliselwa kwakutsha nje kwe Vivo Y93, Ushicilelo loLutsha lweVivo Z1 y Ndihlala kwiX21sInkampani yaseTshayina izisa i-terminal entsha kwaye iyayidibanisa kwikhathalogu yayo, kwaye ayisiyonto ngaphandle kwe Vivo Y95, iselfowuni eboniswe njengenye indlela efanayo efanayo naleya ikhankanyiweyo.
Esi sixhobo Iza ilayishwe yinkcazo kunye neempawu ezithile ezinomdla kakhulu. Okulandelayo, sikunika zonke iinkcukacha zale smartphone intsha. Masibone!
IVivo Y95 ixhotywe ngescreen se-IPS LCD esikwi-6.22-intshi. Ivelisa isisombululo se-HD + se-1.520 x 720 pixels. Bekucingelwa ukuba ifowuni iza kuba neMediaTek Helio P22 SoC, kodwa iimpapasho ezivela kwiiPhilippines zibanga ukuba zixhotyiswe IQualcomm Snapdragon 439Ikhoyo phantsi kwefowuni yeVivo Y93.
Iprosesa yeVivo Y95 idityaniswa kunye I-4 GB yememori ye-RAM kwaye inendawo yokugcina yangaphakathi ye-64 GB -yandiswa nge-MicroSD-, njengeVivo Y93 nayo, enye iselfowuni ekwaxhotyiswe ngoluqwalaselo. Ukongeza, ixhotywe ngebhetri yomthamo we-4,030 mAh.
Ngakolunye uhlangothi, I-smartphone inezinto ezili-13 kunye nee-2 ze-megapixel ezisetiweyo zekhamera. Kwakhona, imodyuli yekhamera efanayo emiselweyo kwifowuni ye-Y93. Endaweni yekhamera engaphambi kwe-8-megapixel, i-Y95 isikelelwe nge-20-megapixel snapper, exhotyiswe ngobukrelekrele bokuzenzela kunye nobuhle bobuso bobuso kwaye iya kusetyenziswa ekubonakaleni kobuso.
Inkqubo yokusebenza I-Android 8.1 Oreo phantsi kweFunTouch OS 4.5 UI Iza ngaphambili kulayishwa kwifowuni. Ezinye izinto zibandakanya ukufundwa kweminwe, okufumaneka ngasemva kwi-smartphone.
IVivo Y95 ngoku iyafumaneka ukuze ithengwe kwiivenkile zeVivo kwiiPhilippines kananjalo nakwiivenkile ezingamaqabane ezikwi-intanethi. Ifowuni ephathekayo inexabiso lentengo I-13,999 pesos yasePhilippines (~ 233 euro). Iza kukhetho lombala wegradient, njenge-Starry Night Black kunye ne-Aurora Red.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IVivo Y95 ngoku isemthethweni eneenkcukacha eziqhelekileyo kunye neempawu zoluhlu oluphakathi